Armadillo သည်စွန့်စားမှု - အုတ်တနေ့ (Armadillo Adventure - Brick Breaker) - 2Game
KMD ဂိမ်းများကိုကွဲပြားခြားနားသောမြေပုံများအား & အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူဆော့ကစားရန်အသစ်ကိုဘောလုံးဂိမ်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သငျသညျ Armadillo မြင်ပြီလော Armadillo သည်အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုယူနိုင်ရန်အတွက်သကြားလုံးကိုဖကျြဆီးအပေါင်းတို့နှင့်တကွကြယ်များမှစုဆောင်းရန်ဂန္အုတ်အနိုင်အထက်ကာလအတွင်းဘောလုံးပုံသဏ္ဍာန်ရနိုင်နိုင်ပါတယ်။
တိုင်းတစ်ခုတည်း level သည်မိကျောင်းကိုဖကျြဆီး, ထိုလုပ်ကွက်ကိုချိုးဖောက်ထားတဲ့ကွဲပြားခြားနားသောအခက်အခဲများရှိပြီး, မိကျောင်းနှင့်၎င်း၏ minions ဆန့်ကျင်ကမ္ဘာကြီးကိုကာကွယ်ပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အုတ်အနိုင်အထက် Armadillo သည်အချို့သောအထူးလှုပ်ရှားမှုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောသငျသညျခဲယဉ်းအောက်ခြေပေါ်မှာထင်း bar ကိုပွတ်ဆွဲသောအခါ Armadillo သည်ထက်ပိုသောအုတ်ကိုဖကျြဆီးနိုင်ရန်အတွက်သစ်ကိုကွေးပုံသဏ္ဌာန်မှအသွင်ပြောင်းနိုင်လုပ်နိုင်အဖြစ်ပါဝါ-ups ရှိပါတယ်။ KMD ဂိမ်းအဖြစ်, ကျနော်တို့ခေတ်ပြိုင်ကမ္ဘာ့ဗားရှင်းအသစ်နှင့်အတူ Arkanoid ဂိမ်းဖန်တီးလို။
– Armadillo သည်စွန့်စားမှုအုတ်အနိုင်အထက်ဂိမ်းရှိအုတ်ဖျက်ဆီးဖို့ရှိရာဘောလုံးကို, hit မှပေးနိုင်ရန်အတွက်လုပ်ကွက်ပွတ်ဆွဲကစားရန်လွယ်ကူသည်။
– သင်ကစားပွဲ-play မှာ3အဓိကအများအပြားအံ့သြဖွယ်ပါဝါ-ups ရပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကအပြုသဘောနှင့်အဆိုးဂိမ်းစဉ်အတွင်းသင်ထွက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
– သင်ရှာတွေ့ crystals သူတို့နှင့်အတူစုဆောင်းသို့မဟုတ်ဈေးကွက်ထဲမှာကသူတို့ကိုယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
– ကပေါ်သွားခက်ခဲများနှင့်ခက်ခဲပါလိမ့်မည်သောတစ်ခုတည်းသောမြေပုံသွား။ သင့်ရဲ့ Power-ups မှန်ကန်စွာအသုံးပြုပါ။
– Candy အုတ်ကွဲပြားခြားနားပြသနိုင်ပါတယ်, သင်ဂိမ်းထဲမှာမြင်လိမ့်မည်။
– ဤအဆုံးမဲ့ရှင်သန်မှုဂိမ်းမှာတော့သင်သာကစားရန် 10 ဘဝတွေကိုရှိသည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျသစ်ကိုအဆင့်ဆင့်ကြည့်ရှုရန်သင့်အသက်တာကို upgrade နိုင်ပါတယ်။
* Armadillo သည်ပြေးအဆိုပါအုတ်အနိုင်အထက်တူသောအခြားဂိမ်းထဲကနေတဦးတည်းလျှို့ဝှက်ထားပါတယ်။ သင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုပွတ်ဆွဲနေချိန်တွင်သင်သည်လက်ျာနှင့်လက်ဝဲဘက်ကနေ Armadillo ထိမှန်လျှင်ကြောင့်သင်သတိထားရပါမည်။ Armadillo သည်ထက်ပိုသောအုတ်ဖျက်ဆီးဖို့ကွေးရိုက်ချက်ရှိပါတယ်။
သင့်ဖေ့ဘုတ်ခ်သူငယ်ချင်းများ ” ရမှတ် Beat နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့ထက်ပိုကောင်းနေသက်သေပြ! အကောင်းဆုံးအုတ်အနိုင်အထက်ကစားသမားနှင့်အတူ Facebook ကသူငယ်ချင်းများကိုစာရင်းသို့မဟုတ်သင့်နိုင်ငံသို့မဟုတ်ကမ္ဘာ့ဖလား၌သင်တို့၏ရမှတ်ကိုကြည့်ပါ။ အားလုံးအုတ်အနိုင်အထက်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့မပျော်စရာများအတွက်လုပ်ကွက်ဖြိုချလိမ့်မည်! အစဉ်အဆက်အကောင်းဆုံး Arkanoid အုတ်ဂိမ်း!
Web ကို: http://www.kmdgames.net
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/kmdgames
Android အတွက် Armadillo သည်စွန့်စားမှု – အုတ်တနေ့ (Armadillo Adventure – Brick Breaker) အလွန်ရေပန်းစားသည်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဂိမ်းကစားထောင်ပေါင်းများစွာ၏မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမပါဘဲရဖို့အတှကျဝမျးသာပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်ကူညီနိုငျပါသညျ! အခမဲ့ဂိမ်းကို download လုပ်ပါရန်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သောဖိုင်ကိုရွေးသင် file ကိုရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ Armadillo သည်စွန့်စားမှု – အုတ်တနေ့ (Armadillo Adventure – Brick Breaker) apk download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှငျ့သငျတက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းများအတွက်ဂိမ်းအပြည့်အဝဗားရှင်းခံစားကြသည်! မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုခံစားဖို့အကောင်းဆုံး gadgets တစ်ခုမှာ iPhone ကိုဖြစ်ပါသည်, Armadillo သည်စွန့်စားမှု – အုတ်တနေ့ (Armadillo Adventure – Brick Breaker) iOS အတွက်ထိပ်တန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ကစားရန်သင့်ကိုကူညီနိုငျပါသညျ! iPhone အတွက် Armadillo သည်စွန့်စားမှု – အုတ်တနေ့ (Armadillo Adventure – Brick Breaker) ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိရိယာ၏မော်ဒယ်ကို select ရန်သင့်အားအကြံပြု, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကအသင့်တော်ဆုံးဂိမ်း app များကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သော .ipa ဖိုင်ကိုရွေးသင်ကစားပွဲရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ Armadillo သည်စွန့်စားမှု – အုတ်တနေ့ (Armadillo Adventure – Brick Breaker) ကို download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှင့်သင်အိုင်ပက်သို့မဟုတ်, iPod တို့အတွက် Armadillo သည်စွန့်စားမှု – အုတ်တနေ့ (Armadillo Adventure – Brick Breaker) ခံစားနေကြသည်။ ထိုအသတိရ! ကျနော်တို့နေ့စဉ်အခမဲ့ IPA ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကို update ဒါညှိနေဖို့!